ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံကြမယ်လေ… Best web awards | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Best Web Awards » ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံကြမယ်လေ… Best web awards	116
ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံကြမယ်လေ… Best web awards
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Dec 24, 2014 in Best Web Awards, Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 116 comments
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း နှစ်သစ်အကြို နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်အခါသမယ ကူးပြောင်းဖို့အချိန်လည်းအလွန်ကိုနီးကပ်လို့လာပါပြီ
ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့ရွာသူားတွေ ပျော်ရွှင်စွာဆုံတွေ့ပွဲနဲ့ မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲကြီးကိုလည်း
မန်းဂဇက်မှာမန်ဘာဝင်ပြီး စာရေးကြ၊ ကွန်မန့်ပေးကြနဲ့
ဒီလိုရေးကြ မန့်ကြရင်းနဲ့ စိတ်ကူးတူတဲ့ ရွာသူားတစ်ချို့တိုင်ပင်ကြပြီး မန်းဂဇက်ချစ်သူများအကြိုက်စာပေဆု
ပေးဖို့၊ တစ်လတစ်ကြိမ်အကြိုက်ဆုံးစာမူရွေးကြပြီး ၆လတစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ဆုပေးပွဲလုပ်ကြဖို့သဘောတူကြပြီး
ကိုယ့်ရံပုံငွေနဲ့ကိုယ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါဗျာ…အဲ့ဒီမှာ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်
ကျုပ်ဆိုတဲ့…ကြီးမှ မိုက်နေတဲ့… ကြီးမိုက်ပါပဲ….ဒီလိုနဲ့လိမ်ဖယ် လိမ်ဖယ်နဲ့ လျှောက်လာခဲ့ကြတာ..ခုဆိုရင်ဖြင့်….
ကို..လေးကြီမ်မြောက်ကျင်းပဖို့ ရက်တွေနီးလာပြန်ပါပကော။ ဘာပဲပြောပြော..ဒီဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးဟာ….
ခုဆိုရင် 2014 ခုဒီဇင်ဘာလမှာ နောက်ထပ် တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ….
ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲအခန်းအနားကို ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နေ့ မှာ ကန်တော်ကြီးထဲက P3 စားသောက်ဆိုင်မှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာ ဗွေဆော်ဦး ဆုရရှိခဲ့သူများကတော့
၄၀ ကျော် ကျမရဲ့ အသည်းကွဲ တမ်းချင်း
ထောင်ထွက်ကြီးမိုက်…Ex-convict အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂
အစားမတော် တစ်လုတ်နဲ့ သေမင်းကို ခလုတ်တိုက်ခဲ့သူ
ဒုတိယအကြိမ် မန်းဂဇက်ရွာသူရွာသားများတွေ့ဆုံပွဲ နဲ့ ဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့ မှာ ကန်တော်ကြီးထဲမှာပဲ ရှန်တီစားသောက်ဆိုင်မှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်…
အဲ့ပွဲမှာ ဒုတိယံမိ ဆုရရှိခဲ့သူများကတော့….
ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း)ဲ
(ဧပြီ + မေ)၊ ၂၀၁၃
ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုရစာမူများ
(၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လထိ တစ်နှစ်တာ)ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်
(အဲဒီအမှတ်တရ စာအုပ်ကို ဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်)
တတိယ အကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲအခန်းအနားကို တော့ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက်နေ့ မှာ ကန်တော်ကြီးထဲက ရှန်တီစားသောက်ဆိုင်လေးမှာပဲထပ်မံပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ပွဲမှာ တတိယံမိ ဆုရရှိခဲ့သူများကတော့….
တစွန်းတစ ငယ်ဘဝနှင့် ပြန်သတိရမိတဲ့ ကာတွန်းတွေ
သဒ္ဓါကို ပညာက စိန်ခေါ်ခြင်း
နန်းတော်ရာသူ | မောင်ဘလိူင်
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း(၁ မှ ၈၄)
မတူကွဲပြားသော လူအများစုဝေးနေထိုင်ရာ… တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော Public
အခုဆိုရင် စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် “မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ” ကို ကန်တော်ကြီးထဲမှာ မကျင်းပတော့ပဲ အင်မတန်သာယာလှပတဲ့ အင်းယားကန်နံဘေး…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် နောက်တဲ့တဲ့က “စိမ်းလမ်းစိုပြေ” စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ စီစဉ်ထားပါကြောင်း နဲ့
ရွာသူ ရွာသားများအားလုံး(တစ်ယောက်မကျန်) ပျော်ရွှင်စွာ ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားခင်မင်စွာနဲ့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာ….
(ရှေးပဝေသနီက ရွာထဲဝင်ခဲ့သူမှသည် မနေ့တစ်နေ့က မှရွာထဲရောက်သူ ရွာသူားအားလုံးကိုဖိတ်ကြားတာပါနော်)
မှတ်ချက်။ စာရေးကောင်းရင် ရွာထဲရောက်ခါစ စာရေးသူကိုပင် မိမိတို့အဖွဲ့မှအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်း
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ၆လ တစ်ကြိမ်မလုပ်ဖြစ်ပဲ ၂၀၁၄ တစ်နှစ်စာစုပေါင်းပြီး ကျင်းပမှာဖြစ်လို့ ဆုရသူတွေလည်းများ
တက်ရောက်သူတွေလည်းများပြားစည်ကားမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ နေရာရော အစားအသောက်ပါ တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစီစဉ်ထားပါကြောင်း အားလုံးကိုအသိပေးလိုပါတယ်…..( တက်ရောက်လာသူ ရွာသူားများကို သဂျီးပို့ပေးတဲ့
“ကျ မ ဆိုက် ကားသ မား ” ဧပြီ+မေလ၊ ၂၀၁၄
ကျိန်စာသင့်သော ငွေငါးသိန်း ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၄
ဂျိုး စာစုများ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၄
ဈေးသည်နဲ့…ဆေးသည် အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၄
နိုဝင်ဘာလနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုကိုတော့…မကြာမီပဲ
အစီအစဉ်။ လွတ်လပ်စွာ မီးစဉ်ကြည့်က ကြမည်။
မှတ်ချက်။ နေရာနှင့်အစားအသောက်စံနစ်တကျ မလေမလွင့် စီစဉ်နိုင်ရန်အတွက်
တက်ရောက်မည့်သူများကွန်မန့်လေးဖြင့် စာရင်းပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့်…
၂၄၊ ၁၂၊ ၂၀၁၄
min kyansix says: တကယ့်ကြည်နူးစရာပွဲလေးဖြစ်မှာဘဲ
ရွာသားအသစ်ကျွန်တော်က အဝေးကဘဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး ဒီ့ထက်မက အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ
kyeemite says: min kyansix လည်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ပါတယ်…သစ်သစ် ဟောင်းဟောင်းပါဗျ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 36
apolo11 says: ပျော်စရာကြီးပါလား . . . . . .
Swal Taw Ywet says: ကျနော့်ရဲ့ မနှစ်က မှတ်တမ်းပို့စ် တော့ ပြန်ဖေါ်ထားလိုက်ပြီ။
ကိုရာမည ရဲ့ပို့စ်နဲ့တွဲမှ ကောင်းမှာ ဘယ်လိုပြန်ရှာရမှန်းမသိ။
သဂျားဖြစ်ဖြစ် ဇီဇိလေးဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဖေါ်ပေးပါအုံး။
ခင်ဇော် says: ခုလေ။ ဇီဇီက ဘာကို မှ မတူး မဖော်တော့ပါဘူး ကိုကိုစွယ်။
သများ နောင်တရ ပြီး လိမ္မာသွားပါပြီ။
ခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/192387
မန်းဂေဇက် လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းကြီးပျောက်ဆုံးမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေ- Swal Taw Ywet http://mandalaygazette.com/192185
မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးမှု (စ/ဆုံး)- ရာမည
kyeemite says: .ကိုစွယ်တော်ရေးထားတာလေးတော်တော်သဘောကျသဗျာ…
.ဒီနှစ်အတွက်တော့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မဲ့ ခြင်ကျားပူက လူမိုက်ခင်ဇော်အလှည့်ပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ငင်။ တညားက ဖေဖောဝါရီ ၂ ရက်မှ ခြင်ကားပူ ပြန်ရောက်မှာ။
သများ ဗားရှင်းက နောက်က လိုက်ပါ့မယ်။
Was this answer helpful?LikeDislike 301
မိုး မင်းသား says: အနော်လည်း ပွဲကိုလာပါမည်လေ…
kyeemite says: .မိုးမင်းသားရေ..လာဖြစ်အောင်သာလာပါဗျာ..ကြိုဆိုလျှက်ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 177
ko six says: လမ်းစရိတ်​အတွက်​ ဖန်​လိုက်​ဦးမယ်​ဗျ
Maung Thura says: အဟမ်းးးး
ကျနော်ချစ်သော ကဗျာတွေကို ဖန်တီးတတ်သော လက်တစ်စုံနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့…
ဒီကိုအရောက် အကုန်အကျခံချင်စိတ် ရှိပါတယ် ။
.လောလောဆယ် ဘက်ဂျက်အခြေအနေက မပေးသမို့…
ပွဲတက် အကျီ င်္(အကျီ င်္သာ) စပွန်ဆာပေးပါရစေ… အကျီ င်္ကတော့ … ဂဇက်တံဆိပ်ရိုက် အကျီ င်္ပါ..
ဆရာဆစ် မှာထားတဲ့ အကျီ င်္ကို.. ကျနော်က လက်ဆောင်ဝယ်ပေးပါရစေနော..
ဆိုတော့… ပွဲကိုသာ အရောက်လာ…
အကျီ င်္မပါခဲ့ရင်တောင် ပူစရာ မလို….
weiwei says: လာပါမယ်လို့ .. ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ထဲပါပဲ ..
တိမ်မည်း says: လာပါမယ်ဗျို…. တယောက်တည်းပါ….
kyeemite says: ko six
တိမ်မည်း….တို့လာကြမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျ…ဆက်ဆက်လာကြပါနော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: တညား ကို ပွဲတက်ဖို့ လူရွေးပေးပါ။
ခု ဘူ့ကို ရွေးရမှန်းမသိတော့ဝူးးး
kyeemite says: .တကူးတက ရွေးပေးစရာမလိုပါဘူး ခင်ဇော်ရယ်..လာသာလာခဲ့ပါ
.ရောက်တာနဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေရပါစေ့မယ် (ကြွေးရှင်တွေ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Maung Thura says: ဆက်ဆက် လာပါ့မယ် ခည
ko six says: စာ​ဖတ်​ရတာနဲ့တင်​ ​ပျော်​စရာဂျီးဗျ
Kaung Myat Thu says: ရွာထဲလာလိုက်၊မလာလိုက်လူ(Kaung Myat Thu)ကလည်းသူများတွေပျော်နေတာတွေ့တော့သွားချင်သား။
kyeemite says: .လာဖြစ်အောင်လာဂျိုင်းစေချင်ပါတယ် ကိုကောင်းမြတ်သူ…အချင်းချင်းတွေပဲဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1819
နွယ်ပင် says: နွယ်ပင် + ဂဂ ဟီးးးးးးးး ကျန်ခဲ့မှာဆိုးလို့ စာရင်းလာပေးတာပါ …
ရွာ Password မေ့နေ့လို့ တစ်ကုန်စဉ်းစားလိုက်ရတယ် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 38
Myat Pearl Phyu says: မှတ်တမ်းတင်ပုံများကို ပိုစ့်များကို စောင့်နေမယ်…
Myat Pearl Phyu says: Congratulations !!!!
မြစပဲရိုး says: ဟိုးတစ်ခါ ရွာ ရဲ့ ပထမဆုံး အလှူတုန်းက အစောကြီး ထပြီး နိဗ္ဗာန်ဆော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးကြီးပု ကို လွမ်းမိနေတယ်။
သူကတော့ ရွာ ကို အရေးတောင်လုပ်ပြီး မကြည့်တော့။ :-((((((
မြစပဲရိုး says: ပြန် မရောက်ကြသေး ဘူးလား ဗျို့။
ဒီမှာ သတင်း ဓာတ်ပုံ တွေ ကို စောင့်နေတာ ကြာပြီ။